Rudo Harwuna Muganhu Munyika yeGeorgia
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Cebuano ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Malagasy Malayalam Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Yoruba Zulu
PACHIRI nenguva refu Sanel asati atomboberekwa, vanachiremba vakaudza vabereki vake kuti kana aizoberekwa ari mupenyu aizova nedambudziko reutano rakakura. Musi waakaberekwa chaiwo, Sanel aitofanira kuitwa oparesheni. Vabereki vake, avo vaigara kuAbkhazia—nharaunda yakazvisunungura kubva pasi peGeorgia—vaisakwanisa kuwana chiremba aizoita oparesheni asingazomuwedzeri ropa.
Vabereki vake vakataura neKomiti Yekukurukura Nezvipatara yeko. * Vakanzwa kurerukirwa chaizvo hama dzemukomiti iyi padzakakurumidza kuwana chiremba akabvuma kuvhiya Sanel asingazomuwedzeri ropa muTbilisi, guta guru reGeorgia. Asi sezvo amai vaSanel vainge vachangobva kusununguka, vainge vasati vanyatsosimba zvekukwanisa kuenda kuTbilisi. Saka pakarongwa kuti vanaambuya vaviri vaSanel, avo vaiva Zvapupu, vaende naSanel kuchipatara chekuTbilisi.
Oparesheni yacho yainge isiri nyore, asi yakabudirira. Nguva pfupi oparesheni yaitwa, vanaambuya vaSanel vakanyora kuti: “Takagara muchipatara kwemazuva anodarika 20. Panguva iyoyo, hama nehanzvadzi dzakawanda dzemuGeorgia dzaitishanyira uye dzaitibatsira. Vakawanda vaitinzwira tsitsi. Takamboverenga nezverudo rwune hama dzedu pasi rese, asi iye zvino ndisu takanga tava kuratidzwawo rudo rwakadaro.”
^ ndima 4 KuGeorgia, vakuru vari muKomiti Yekukurukura Nezvipatara vanoziva vanachiremba vanodarika 250 vanovhiya, avo vanobvuma kuvhiya vasingazowedzeri murwere ropa.
Sei Zvapupu zvaJehovha Zvisingabvumi Kuwedzerwa Ropa?
Pane nhema dzakawanda dzinotaurwa nevanhu vachipomera Zvapupu zvaJehovha panyaya yokuwedzerwa ropa. Ona kuti isu takamira papi panyaya iyoyo.